Thola ukuthi ungalihlobisa kanjani igumbi lokuphumula ngezitshalo | Bezzia
Ungalihlobisa kanjani igumbi lokuphumula ngezitshalo
USusana Garcia | 05/04/2021 20:00 | Izesekeli zasekhaya, Umhlobiso
Izitshalo akuzona izidalwa eziphilayo kuphela ezisisiza ukuthi sakhe indawo enempilo futhi ekhetheke kakhulu, kepha futhi ziyingxenye yomhlobiso. Ku- amakamelo amaningi ekhaya singabeka izitshalo, ikakhulukazi uma singenawo ithala noma ingadi esingaba nayo. Kungumqondo omuhle ukwengeza umbala othile ngezitshalo ukwenza igumbi lokuphumula lamukeleke kakhulu.
I-Las izitshalo zokuhlobisa endaweni yegumbi lokuphumula zingafakwa ezindaweni eziningi. Kubalulekile ukwazi ukuthi ungazibeka kuphi ukuze zingaphazamisi nokuthi zihlobise. Uma uzofaka ezinye izitshalo ekhaya lakho, unganqikazi ukufaka ezinye egumbini lakho lokuphumula ukuze isikhala sithokomele futhi sihle ngasikhathi sinye.
1 Ungazinakekela kanjani izitshalo egumbini lokuphumula
2 Faka umdolofiya egumbini lokuphumula
3 Dala ikona lesitshalo
4 Izimila kumabhasikidi we-wicker
5 Izitshalo ezilenga egumbini lokuphumula
Ungazinakekela kanjani izitshalo egumbini lokuphumula
La Indawo yokuphumula yindawo evamile lapho kuchithelwa khona amahora amaningi. Kungakho kumayelana nokwakha indawo ethokomele kakhulu lapho ungakhululeka khona. Izimila zisisiza ukuba sithuthukise imfudumalo kunoma iyiphi indawo. Ukuze sizibambe kufanele sazi uhlobo lwesitshalo esikuso nokunakekelwa esikudingayo. Njengoba kufanele siwathene, kufanele siwanisele malini noma uma edinga ukukhanya okuqondile noma cha. Kubalulekile futhi ukuthi sikhethe kuphela izitshalo zasendlini, ngaphandle kwalokho ngeke zikwazi ukuhlala endlini.
Faka umdolofiya egumbini lokuphumula
I-Los I-cacti endaweni yegumbi lokuhlala ingumqondo omuhleYize uma inkulu, kufanele inakekelwe ukuze izilwane noma izingane zingalimali ngayo. Lawa ma-cacti alungele zonke izinhlobo zezindawo. Emakamelweni okuhlala bakha izikhala ezinobuntu obuningi. Umhlobiso we-boho, isitayela seNordic noma isitayela saseCalifornia zilungele ukugcwalisa ukusetshenziswa kwalezi cacti, ikakhulukazi uma zikhulu. I-cactus ayidingi ukunakekelwa okuningi, ngoba kufanele babe namanzi amancane futhi awathenwa noma yini efana naleyo, ngakho-ke uma sintsha ekunakekeleni izitshalo kungumbono omuhle kakhulu.
Dala ikona lesitshalo
Uma u njengesitayela esingajwayelekile nezitshalo, umqondo omuhle ukufaka ikona ngezitshalo. Sebenzisa okokugqoka noma ibhuku lezincwadi ukubeka izitshalo emazingeni ahlukene. Ungangeza endaweni lapho unokukhanya okuhle khona, eduze kwewindi. Amakhona ezitshalo alungile kunoma iliphi ikhaya futhi kusivumela nokuthi siwanakekele kalula. Ungasebenzisa ifenisha endala, ngoba ngaleyo ndlela iyoba nentelezi eyengeziwe. Uma ubeka izitshalo eziningana ekhoneni, ungazixuba, ukhethe ezinye ezihlukile, wakhe ukwakheka okuhle.
Izimila kumabhasikidi we-wicker
Obhasikidi be-Wicker sebethandwa kakhulu ngoba kunjalo izinto zemvelo ezengeza ukuthinta okufudumele ekhaya. Kungakho ezikhathini eziningi zisetshenziselwa ukumboza amabhodwe bese sizithinta ngokukhethekile. Uma uzothenga izitshalo ezinkulu, ungasebenzisa lolu hlobo lwebhasikidi endaweni yegumbi lokuphumula. Amanye anamapompo noma apendiwe ngakho-ke alungele ukuhlobisa eceleni kwezitshalo.
Izitshalo ezilenga egumbini lokuphumula
Enye indlela yokubeka izitshalo kufayela le- Indawo yokuphumula inezitshalo ezilenga. Kukhona izingcezu ze-crochet zokuzilengisa futhi zibukeka zizinhle kakhulu, yize zidinga umsebenzi owengeziwe ngoba kufanele ubeke iziphanyeko futhi ufake nezimbiza, ezingenakuba nkulu kakhulu. Lolu hlobo lwamabhodwe lusetshenziselwa ukwehlukanisa izikhala noma ukuhlobisa izindonga nophahla. Kungumqondo omuhle osisiza ukuthi sisebenzise izitshalo ezindaweni eziningi egumbini futhi sizenze zibe zokuhlobisa.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Umhlobiso » Ungalihlobisa kanjani igumbi lokuphumula ngezitshalo
Imikhuba emibi engaqeda abashadile
Ukubheja kuma-cardigans athungiwe ukudala izingubo zokuvuna